ZOARA FANANTENANA – Hetsika
Tetikasa mampiavaka ny Fiangonana Zoara Fanantenana ny Varin’i Jesoa. Akana 1 sotro isaky ny kapoaka ny vary arotsaka. Angonina iny ary aterina aty ampiangonana rehefa alahady. Amidy amin’ny sarany ariary 100 ariary monja ny kapoaka ho an’ireo fianakaviana sendra fahasahiranana mivavaka eto amin’ny Zoara Fanantenana. Misy ny fanadihadiana tontosain’ny Sampana Dorkasy ka izay tokatrano ao anatin’ny lisitra avokoany ihany no mahazo manjifa ilay vary amidy mora isaky ny alatsinainy. Fampiharana ny baikon’i Jesoa Kristy hoe « Didy vaovao no omeko anareo dia ny hifankatiavanareo… » (Jaona 13:34a) ny varin’i Jesoa izay iarahan’ny Fiangonana Zoara fanantenana Ambohipo manatanteraka.
Amin’ny fiainana andavanandro dia ny mpiray tampo, ny zanaka sy ray amandreny no mifanampy raha misy tojo fahasahiranana. Amin’ity tetikasa ity kosa anefa dia tsy misy idiran’izay fifandraisana ara-nofo izay fa ny finoana ny Tenin’Andriamanitra no manetsika. Ao amin’ny filazantsara araka an’i Lioka 3:10-11 dia misy izao andinin-tsoratra masina izao mamintina ny foto-kevitry ny tetikasa Varin’i Jesoa : « Ary ny vahoaka nanontany an’i Jaona hoe : Inona ary no ataonay ? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe : Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ny tsy manana ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toa izany koa izy« .
Araka izany dia asan’ny olona mibebaka ny varin’i Jesoa. Tsy fiantrana akory no antony anaovana azy fa noho ny fitiavana. Amin’ny varin’ny Jesoa anefa dia tsy ny antsasamanilan’ny fananantsika na ny vary anjarantsika no angatahana amintsika fa zara ny ampahafolon’ny kapoaka fotsiny. Araka ireto andinin-tsoratra masina ireto dia manentana sy mampianatra antsika hanana toetra tia miahy ireo madinika koa ny Tompo:
– Asan’ny Apostoly 20 andininy 35 : « efa nasehoko anareo tamin’ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka hahatsiaro ny tenin’I Jesosy tompo, ilay manao hoe: “mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray”« .
– Filazantsara nosoratan’i Matio, toko faha 10 andininy 42: « Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hosotroin’ny iray amin’ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa tsy ho very ny valimpitiany« .
Sarobidy tokoa ho an’ny zanak’israely ny rano satria faritra tena saro-drano no nonenan’izy ireo. Miantoka ny fivelomany mihitsy izany ny rano. Mitovy lenta amin’ny rano teo amin’ny fiainan’ny Zanak’Israely ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy. Mba hampazava ny hevitry ny teny dia azo soloina hoe vary ny teny hoe rano eto amin’ity andini-tsoratra masina ity.
Anaovana tahiry manokana ny vola vidin’ny vary azo amin’ny tetikasa “varin’i Jesoa”. Io vola io mantsy no ividianan’ny fiangonana ny sakafon’ny mpiantafika rehetra mandritra ny rodorodom-pitoriana tanterahana isan-taona. Ampy hiantohana ny sakafon’ny mpiantafika maherin’ny 500 intelo isanandro eny andalana mandroso sy miverina ary koa mandritra ny fijanona amin’ilay tanana anaovana ny fitoriana ny tahiry ao amin’ity kitapombola ity.
Tsy misy izany mahantra izany eo amin’ny sehatry ny fiangonana satria ny olon-drehetra dia samy afaka mandray anjara amin’ny fizarana fiainana ho an’ny hafa. Voaporofo amin’ny alalan’ny “varin’I Jesoa” fa ireo “mahantra” eo anivon’ny fiaraha-monina no mamatsy sakafo ny mpiantafika izany hoe mandray anjara feno amin’ny fanatontosan’ny asan’ny Tompo ry zareo. Tsy araka ilay fomba filaza hoe “Voninahitra ifanomezana” velively io fa tena sakafo mahavoky sady feno mihitsy. Manova ny foto-pisainana koa ity tetikasa ity satria na ry zareo sokajian’ny fiarahamonina ho sahirana aza dia miantoka ny sakafon’ny fiangonana.
Manentana anao tsy hanadino mihitsy ny mitondra ny anjara varin’I Jesoa isak’alahady satria tena fiainana mihitsy no zarainao amin’ny alalany. Sady manavotra olona amin’ny sarotra ianao no mampandray anjara azy amin’ny asan’ny Tompo ihany koa. Nihena kely indray mantsy ny fatran’ny vary voaangona nandritra ny 2 herinandro farany.
Iza no mahita vehivavy tsara ?
« Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe, raha adika, Dorkasy ; ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon’izany vehivavy izany. » Asan’ny Apostoly 9:36
Manomana ny fankalazana ny andron’ny vehivavy ny Sampana Dorkasy Foibe amin’izao fotoana izao.
Ny tontolo andron’ny zoma 8 marsa ho avy izao dia haneho ny maha vehivavy mendrika azy ireo ny renim-pianakaviana sy mpikambana ao amin’ny Sampana Dorkasy avy amin’ny fitandremana maro manerana ny Nosy. Eny amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana no hanatanterahana izany ary endrika maro samihafa no isehoany.
Tranoeva maromaro no hampirantina ireo karazana talenta sy traikefa ananan’ny vehivavy Dorkasy eo amin’ny fiainana andavanandro sy ny fanasoavana ny fiaraha-monina. Hisy ny fandaharam-potoana izay hahitana fanehoana sy fizarana ny fahaiza-manao mahakasika ny sakafo, fanjairana, taovolo sy fikarakarana ny tenan’ny vehivavy, ao ihany koa ny sehatra hanehoana ireo hira sy zavakanto izay samy manome voninahitra an’Andriamanitra avokoa.
Hanana ny anjarany ao anatin’izany moa ny Sampana Dorkasy avy eto amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo.